Angola: mpanao fihetsiketsehana mitaky ny rariny momba ny nahafaty an’i Dr Sílvio Dala tany am-pitazonana azy · Global Voices teny Malagasy
Toherina ny fanambaràna ofisialy nataon'ny pôlisy
Voadika ny 27 Septambra 2020 15:17 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, English, Swahili, Ελληνικά, Português
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahafatesan'i Dr Sílvio Dala. Eny amin'ireo sorabaventy, teny faneva toy izao no azo vakiana : « Sílvio Dala aho » ; « Dr Sílvio Dala maty tsy nanan-tsiny » ; « Novonoin-dry zareo i Sílvio Dala, Novonoin-dry zareo daholo ny mpitsabo ». Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna lisansa CC-BY 3.0.
Fihetsiketsehana nipoaka avy amin'ny hetsika fanoherana ny nahafaty an'i Sílvio Dala, dokotera iray 35 taona namoy ny ainy tamin'ny 1 Septambra raha izy voatazona vonjimaika tany amin'ny pôlisy.
Avy eo nentin'izy ireo ilay mpitsabo ho any amin'ny biraon'ny pôlisy tao Catotes, ao amin'ny tanànan'i Rocha Pinto, ao Loandà, ary tao izy no nanomboka nahitàna soritra harerahana. « Torana izy avy eo, nitarika fianjerana henjana niafara tamin'ny fisianà ratra madinika teo amin'ny lohany », hoy ny tatitra ofisialy avy amin'ny pôlisy, izay manamafy ihany koa fa teny an-dàlana i Sílvio Dala no namoy ny ainy raha iny ‘ndeha hitondra azy hamonjy toeram-pitsaboana iny ny pôlisy.
Manohitra io filazàna io ny Sendikàn'ireo mpitsabo. Nandritra ny antsafa ho an'ny Voice of America, nambaran'ny filohan'io sendikà io, Adriano Manuel, fa mifanohitra ny fanambaràna ataon'ireo manampahefana, izay vao mainka manamafy ny fieritreratana hoe nisy daroka natao an'ilay mpitsabo.
Tao anaty lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Deutsche Welle, manazava i Adriano Manuel hoe « tsy ny tena izy ilay antom-pahafatesana naroson'ny pôlisy. Na iza na iza mpitsabo, ary nianatra ny fitsaboana dia samy mahafantatra fa tsy izany no hitarika amin'ny fahafatesan'i Sílvio. » Io lahatsoratra io ihany koa no mitanisa loharano iray avy amin'ny ministeran'ny atitany manamafy fa ny valin'ny fitsirihana ny razana, natao teo anatrehan'ny mpampanoa lalàna sy ny fianakaviana, dia manilika ny fiheverana fisianà herisetra natao tamin'ilay mpitsabo.
Nambaran'ilay sendikàn'ireo mpitsabo ny fikasàn-dry zareo hitory ny pôlisy sy hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsaràna. Mandritra izany fotoana izany ihany, nambaran'ny governemanta angôley ny fanangànana kaomity iray hanadihady, iarahana miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamàna handinika ny tena zavanitranga.
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahatesan'i Dr Sílvio Dala. Eny amin'ireo sorabaventy, teny faneva toy izao no azo vakiana: « Sílvio Dala aho, ilay dokotera maty tao amin'ny biraon'ny pôlisy. » Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna ny lisansa CC-BY 3.0.
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahatesan'i Dr Sílvio Dala. Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna ny lisansa CC-BY 3.0.
Hatramin'ny nanombohan'ny fisian'ilay valanaretina tao Angolà, marobe no voarakitra ireo firotsahana an-tsehatra niharo herisetra nataon'ny pôlisy [fr], izay ny sasany dia nanaisotra ny ain'ireo olompirenena nandritra ny fibedesana azy ireny hanaraka ireo fepetra henjana [momba ny COVID-19].
Tao anaty fanambaràna iray ho an'ny masoivohom-baovao portiogey Lusa, nangatahan'ilay mpiangaly gadona rap, Brigadeiro 10 Pacotes, na i Bruno Santos raha ny tena anarany, ny hametrahan'i Eugénio Laborinho fialàna, ary ny hanomezana fampiofànana tsara ireo olon'ny pôlisy, mba hanatsaràna ny fitondrantenan-dry zareo ireny :
Marobe ireo olona naneho ny fitroaran-dry zareo teo amin'ny Facebook sy Whatsapp. Ilay mpikatroka sady manampahaizana Nuno Álvaro Dala dia nilaza ny heviny tao amin'ny Facebook-ny :